रेडियो उदयपुर, मंसिर २५ उदयपुर
उदयपुरको क्षेत्र नं. १ को प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार कांग्रेस र बाम गठबन्धन बीच कडा प्रतिष्पर्धा भईरहेको छ । गनिदै गईरहेको मत–परिणाम सर्बसाधारणका लागि रोचक र चासोपूर्ण बनेको छ । प्राप्त मत विवरणले ७० हजारसम्मको गणनामा कांग्रेसका उम्मेदवार डा. नारायण खड्काले ३ सय ७९ मतले अग्रता लिएको छ । यो भन्दा अगाडी वाम–गठबन्धनका उम्मेदवार मन्जु कुमारी चौधरीले ७३ मतले अग्रता लिएको थियो । यो क्रम अहिले ७० हजार मत गणना भईसक्दाको अवस्थामा पनि कायम रहेकाले सर्बसाधारणका लागि निकै रोचक र कार्यकर्ताहरुका लागि चासो बनेकोे छ । वहाँहरुबीचको अन्तर थोरैमा ३सय र बढिमा ४सयसम्मको फरक देखिएको छ । यो समाचार तयार पार्दाको अवस्थामा कांग्रेसका डा. खड्काले ३१ हजार ३ सय ५२ र एमालेको चौधरीले ३० बजार ९ सय ७३ मत प्राप्त गर्नु भएको छ । खसेको कुलमत ७४हजार ५ सय १० रहेको क्षेत्र नं. १ मा प्रतिनिधिसभाको गणना कार्य जारी रहेको छ । विहान ६ बजेसम्मको मतपरिणाम अनुसार अव लगभग ४ हजार मत गन्न बाँकी रहेको देखिएको छ ।